Rice izitya, amadombolo, namnandi, adlula spring - nawe igama it, zonke zikwimenyu kwaye ukungcamla njengokunyaniseka njenge ukuba ubuse China. Nantso into elindeleke ukusuka enye zokutyela best Chinese eYurophu. Ukuba unqwenela ukufumana ku Amsterdam ngololiwe, Unga ukubamba ukukhwela eParis train, Berlin, kunye nezinye imizi yaseYurophu.
ICite Du Dragon yeyona ndawo iphambili yokutyela amaTshayina eYurophu-Brussels, Bheljiyam
Enye yokutyela inama ingaphakathi kumnandi kunye noyilo egadini kunye izitya zayo emangalisayo, Nikeza Du Dragon e Brussels ubizwa unelungelo wabiza omnye zokutyela best Chinese eYurophu. with phezu 300 izihlalo kunye igadi olugqibeleleyo zokuhomba, uya kuziva ngathi wangena iphupha efanelekileyo Oriental. Nasiphi na isitya iyamangalisa, kodwa siza kukhetha isixa esincinci kunye nokukhethekileyo kwendlu, Peking uyida-, izinto ezimbini kufuneka uzame xa sele ukuya eBrussels ngu loliwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)